किमले किन आफ्नै दाई किम जोङ–नामको हत्या गरे? - Dainik Online Dainik Online
किमले किन आफ्नै दाई किम जोङ–नामको हत्या गरे?
प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७८, मंगलबार ४ : १७
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनका सौतेनी दाइ किम जोङ–नामको सन् २०१७ फेब्रुअरी १३ मा हत्या भएको थियो। मलेसियाको राजधानी क्वालालाम्पुरको विमानस्थलमा शक्तिशाली विष नर्भ एजेन्ट प्रयोग गरेर किम जोङ–नामको हत्या भएको थियो।
प्रहरीले सो हत्यामा संलग्न भएको प्रमाणसहित दुई महिलालाई गिरफ्तार गरेको थियो। इन्डोनेसियाली महिला सिती अइसया र भियतनामकी डोन थि हुअङ गिरफ्तार भएका थिए। मलेसियाको कानुनअनुसार उनीहरुलाई मृत्युदण्ड दिने भनिएको थियो। तर यतिबेला दुवै रिहा भइसकेका छन्। दुवै निर्दोष पाइएपछि उनीहरु रिहा भएका हुन्।
सन् २०१९ को मार्चमा सिती अइसया रिहा भएकी थिइन् भने मे महिनामा हुअङ रिहा भएकी थिइन्। सार्वजनिक भिडिओमा देखिएअनुसार ती महिलाहरुले विषले लतपतिएको कपडाले किम जो–नामको मुख छोपिदिएका थिए।
त्यसपछि अत्तालिँदै किम जोङ–नाम विमानस्थलको स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुने क्षेत्रमा पुगेका थिए। उनको त्यहीँ मृत्यु भएको थियो। त्यसबेला सो घटनाले विश्वभर तरंगा पैदा गरेको थियो कारण उनी उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनका दाई थिए।
तर सो हत्याकाण्डमा सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनकै संलग्नता भएको बताइन्छ। किम जोङ–नाम उत्तर कोरियाली शासन व्यवस्थाको आलोचक थिए जसका कारण उनलाई सन् २००३ मा देश निकाला गरिएको थियो। त्यसयता उनी चीन तथा मकाउमा बस्दै आएका थिए।
नेसनल जियोग्राफीका अनुसार किम जोङ–नामले अमेरिकी केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सी सीआईएसँग मिलेर काम गरेको थाहा पाएपछि किम जोङ–उनले हत्या योजना बनाएका थिए। किम जोङ–नाम आफ्ना भाइको शासनको आलोचना पनि गर्थे। सार्वजनिक भिडिओअनुसार किम जोङ–नामको हत्या भएपछि हत्यामा संलग्न एक पुरुषसँग मेलेसियास्थित उत्तर कोरियाली दूतावासका मानिसहरु भेट्न आउँछन् र उनीहरुले ती पुरुषले राम्रो काम गरेको भन्दै बधाई दिएको देखिन्छ।
यसबाट पनि किम जोङ– उन नै यो हत्याका योजनाकार थिए भन्ने पुष्टि भएको बताइन्छ।
‘हत्या गरेको थाहै थिएन’
ती दुई महिला जसले नर्भ एजेन्टको प्रयोग गरेर किम जोङ–नामको हत्या गरे वास्तवमा उनीहरुलाई थाहै थिएन उनीहरुले हत्या गर्दैछन्। हत्याका योजनाकारहरुले दुई महिलालाई टीभीमा ‘प्य्रांक’ गर्ने भन्दै आकर्षक पैसा दिएका हुन्छन्।
वास्तवमा रमाइलो कार्यक्रमको लागि मानिसहरुलाई झुक्याउने भनेर केही दिनसम्म महिलाहरुलाई धेरै ठाउँमा झुक्याउन लगाइन्छ। हत्या योजनाको खेलमा परेका ती महिलाहरुले रमाइलो कार्यक्रमकै हिस्सा सम्झिएर थाहै नपाई किम जोङ–नामको टाउको विष लागेको कपडाले छोपिदिन्छन्।
यसरी रमाइलो कार्यक्रम सम्झिँदा सम्झिँदै ती महिलाहरुबाट किमका सौतेनी दाईको हत्या हुनपुग्छ। उनीहरुले यो बयान मलेसियाका प्रहरीसँग खुलाएका थिए। यही भनाइ उनीहरुले नेसनल जियोग्राफीसँग पनि बताएका छन्।